शान्तदेखि भीडभाड हुने स्थानमा पनि गर्न सकिन्छ ध्यान, यस्ता छन् फाइदा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ योग ∕ शान्तदेखि भीडभाड हुने स्थानमा पनि गर्न सकिन्छ ध्यान, यस्ता छन् फाइदा
हेल्थ आवाज बिहीबार, २०७९ जेठ ५ गते, ०५:५० मा प्रकाशित
कोभिड-१९ को अवधिमा संक्रमणले शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गरेको थियो । कोभिडले विश्वभरका मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गरेको छ। बाहिर निस्कँदा संक्रमणको डर, सामाजिक दुरी र लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएका कारण मानिसहरुमा विभिन्न असर परेको देखिएको छ । मानसिक समस्याले धेरै गम्भीर रोग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ।
मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न र दिमागमा भइरहेको अशान्तिलाई शान्त पार्न ध्यान गर्न सकिन्छ। ध्यानले दिमागलाई शान्त राख्छ र मानसिक सन्तुलन कायम राख्छ। ध्यानका धेरै फाइदाहरू छन्। ध्यान कुनै पनि समयमा कहीं पनि गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले जान्नुहोस् ध्यान भनेको के हो? ध्यानको विधि र फाइदाहरूबारे पनि जान्नुहोस्।
ध्यान भनेको के हो?
ध्यानलाई ध्यान भनिन्छ। ध्यानले मनलाई शान्त बनाउँछ। तपाईं कुनै पनि समयमा कहीं पनि ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मेट्रोको भीडमा ध्यान गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै अफिसको डेस्कमा बसेर ध्यान गर्न सकिन्छ। धेरैलाई आँखा बन्द गरेर बस्नु भनेको ध्यान हो भन्ने लाग्छ । तर ध्यानमा ध्यान गर्दा मनलाई खाली गरेर विचारलाई खाली गरेर मनलाई आराम दिनु हो । ध्यान गर्दा ध्यानलाई श्वासमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यो कार्यले मनलाई शान्त बनाउन मद्दत गर्छ।
ध्यान कसरी गरिन्छ?
ध्यान पाँच चरणमा गर्न सकिन्छ ।
पहिलो चरण – ध्यान गर्नको लागि आरामदायी ठाउँ हुनुपर्छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आरामसँग कुर्सीमा बसेर वा भुइँमा बसेर ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। सुतेर पनि ध्यान गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो चरण – आफैलाई एक आरामदायक ठाउँमा ठीक गर्नुहोस् र आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। धेरै मानिसहरूले आफ्नो आँखा बन्द गर्न असहज महसुस गर्न सक्छन्, त्यसैले बिस्तारै आफ्नो आँखा विशेष कुरामा केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो ध्यान एउटै कुरामा केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ, आवश्यक छैन कि आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्।
तेस्रो चरण – ध्यान गर्दा, स्वतन्त्र रूपमा श्वास लिनुहोस्। यसका लागि लामो श्वास फेर्नु पर्दैन । बरु, आरामदायी श्वास लिनुहोस्।
चौथो चरण- अब तपाइँको श्वासलाई रोक्न नदिई आउन दिनुहोस् र सासको यो चालमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। श्वासलाई नियन्त्रण नगर्नुहोस्, तर श्वास कति बेर आयो र कति समयपछि आफै बाहिर गयो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। ध्यान गर्दा, तपाईंले आफ्नो नाक, घाँटी, छाती हुँदै नाभिसम्म श्वास कसरी जाँदैछ भन्ने महसुस गर्नुपर्छ। तपाईंले आफ्नो रिब्समा आफ्नो श्वास महसुस गर्नुहुनेछ।
पाँचौं चरण- यस समयमा तपाईको दिमागमा धेरै प्रकारका विचारहरु एकैसाथ चलिरहन्छ। तर, ती विचारहरू बिर्सनुहोस् र श्वासको गतिमा आफ्नो पूरा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। दिमागमा विचारहरू घुम्न नदिनुहोस्।